Nagu saabsan - VideosBrochure
Iyo sida Shenzhen ay tahay magaalo qaali ah, oo ah xarun caalami ah oo loo qaybiyo ganacsiga, waxaan alaabada ugu geyn karnaa macmiilka qaabab kala duwan oo ay ku tiirsan tahay macmiilka, jadwalka, ha ahaato mid deg deg ah ama hawo ama bad, waxaan badeecada u geyn karnaa dekedda si deg deg ah. Si aad u hesho alaab-qeybiye, diiradda saar Shenzhen, si aad u iibsato buug-yaraha fiidiyowga, Xulo annaga!
Shiinaha Sare-qeybiye & Warshad Dhab ah
VideosBrochure (Idealway Tech Company) oo la maalgeliyey sanadkii 2009, oo ah sanadkii ay buug-yaraha fiidiyowgu ku dhasheen. Wax-soo-saarkeenna ugu weyn oo ay ku jiraan buug-yaraha fiidiyowga iyo muuqaalka sawirrada dhijitaalka ah. Moodooyinka buug-yaraha fiidiyowga oo ay ku jiraan kaarka ganacsiga fiidiyowga, iyo gelinta majaladda, cabirka laga bilaabo 2.4inch ilaa 10inch.
Marka laga hadlayo qaabka sawirka dhijitaalka ah, moodooyinka ayaa ku lug leh badhanka saxaafadda dpf, badhanka taabashada dpf, android dpf iyo dhammaan hal kumbuyuutar, cabirrada laga soo bilaabo 7inch ilaa 27inch. Waxaan sidoo kale diirada saareynaa mustaqbalka oo aan si adag isugu dayeynaa inaan calaamadda elektaroonigga ah ee R&D. Badeecada uguhoreysa ee uguhoreeysa diiradda saar mustaqbalka, Waxaan si fiican suuqa u dul istaagi doonnaa oo aan yeelan doonnaa horumar muddo dheer ah!
Kooxda Waa Muhiimadeena Koowaad
Waxaan haynaa koox iibin dhalinyaro ah oo firfircoon oo leh in kabadan 7 sano oo khibrad iib ah xubin kasta oo iib ah ah. Waxay si fiican u yaqaanaan oo si buuxda u fahmaan alaabada waxayna siin doonaan macaamiisha elektaroonig casri ah iyo adeegyo 7 * 24 xirfad leh. Kaliya ma iibineyno alaabada, laakiin waxaa ka sii muhiimsan inaan soo bandhigno khibrad wax iibsi oo heer sare ah.
Shaqaalaheennu waxay soo saarayeen buug-yare fiidiyoow ah muddo 9 sano ah injineerkeenuna wuxuu khabiir ku yahay buug-yaraha fiidiyowga / muuqaalka sawir dhijitaalka ah / sheyga elektaroonigga ah. Ku kalsoonow khibradayada, ku kalsoonow tayadeena kuna kalsoonow awooddeena xallinta dhibaatada!
Waxaa la aasaasay 2009, kooxdayada waxay ku qaadatay 2 sano inay soo saaraan sheygan cusub ugana dhigaan macmiilka iyo macmiilka xiisaha leh. Sida buug-yaraha fiidiyowga loo yaqaan oo loo aqbalo macmiil badan iyo in ka badan, sannadihii 2012 illaa 2013, waxaan ku soo qaadnay koritaankii ugu horreeyay ee gaabiska ah. markaa waxaan sameynaa dadaal aan kala go 'lahayn oo ganacsigu wuxuu helay koror weyn illaa 2018. Hadda waxaan nahay soo saarista ugu sarreysa Shiinaha ee buug-yaraha fiidiyowga / buugga fiidiyowga / baakadka fiidiyoowga ... iwm iyo waddada loo maro mustaqbal ifaya.
1. Inta badan buug-yaraha fiidiyowga.
2. U dhiganta wax soo saarka iyo R&D.
3. Ku qanci macmiilka baahidooda.
4. Ganacsi cusub waa mustaqbalka.
Buug-yaraha fiidiyowga iyo qaabka sawir-gacmeedka dijitaalka ah ayaa ah alaabada ugu weyn ee soo jiidan Ganacsi cusub iyo alaabooyin kale oo ay u baahan yihiin macaamiisheennu waa ganacsiga kale ee innaga mid ah. Badeecadeenu waxay ku raaxeysataa suuq wanaagsan adduunka oo idil. Laakiin sababta oo ah qiimaha sare iyo fikradda Isticmaalka, meheradeena ganacsiga ugu weyn waxay diiradda saareysaa Mareykanka, Yurub (Jarmalka, Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga Main), Bariga-dhexe (sida UAE, Saudi Arabia iyo Qatar), AU. Aag cusub ayaa ah talaabada xigta ee aan galno.
1. Iska ilow saamiga laakiin xoogga saar tayada.
Si adag u xaji suuq darajo sare ah.
Isku day adag si aad uhesho aag cusub.
4. Bixi lacag la mid ah wax soo saarka iyo R&D.